NRVNA isticmaalaa theme fiican meel iyo wakhti ku salaysan oo dhan soo dhaweyn doonta. Waxay ka kooban tahay 30 paylines iyo 5 duntu. gameplay The farxad leh idinka dhigi doonaa inaad miiqdaan duntu ku celceliyeen iyo calaamadaha olaga aad ku lug yeelan doonaan ciyaarta.
Waxaad ku raaxaysan doonaa kulankaan si ha iloobin in aad u ciyaaro xiiso at our casino. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa free at Coinfalls Casino by dhigaalka lacagta ah ilaa £ 50.00 iyo aad u hesho a 200% dhigma ilaa bonus.
NetEnt ayaa loogu talagalay kulankaan ku ambadeen wax fantastik ah oo uu leeyahay sawiro uruursanayey top iyo music breathtaking asalka. NetEnt ayaa la dhigaayo naadi classic iyo kulan casino kuwaas oo sare on tayada iyo tani waa mid ka mid ah kulan ee ugu fiican.
NRVNA ayaa theme wayn oo abuuri doonaa xiiso weyn oo ka dhigeeysa mid ah kulankaan rata waa qurux. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA isticmaalaa calaamadaha saldhig sida 10, J, A, K, iyo Q in aad bixiso laablaabi ilaa x125.
The calaamadaha ugu muhiimsan ee kulankaan ka kooban of a dhir afar qaybood, kabo faras, jeeriga, qaad, oo dawanno. calaamadihii aad ku bixin kartaa multiplier a fantastic ah ilaa x2, 000. Ciyaarta isticmaalaa astaanta duurjoogta ah xiddig cad gudahood xumbo pink oo ku Baddasha dhan images ku duntu ka ahayn logo kala firdhiso ah.
logo kala firdhiso waa dheemman cad ku duudduubtay oo xumbo orange iyo shidaa ka dhigeeysa free muuqdo. Haddii aad dhul on saddex calaamado isku mid ah images khasaarinayay aad ku guuleysan karaa in ay 10 dhigeeysa lacag la'aan ah iyo afar fidiyana waxaad heli doontaa 15 dhigeeysa xor ah oo 5 fidiyana aad ku guuleysan doono 30 dhigeeysa.
Inkastoo dhigeeysa free yihiin daadgureyntaasi feature ee wheel NRVNA waxaa keena halkaas oo aad ka heli multiplier a of x10 oo ay la socdaan 2 dhigeeysa dheeraad ah oo lacag la'aan ah. Ciyaarta ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay hab Autoplay ah halkaas oo aad si toos ah u dhigay kartaa duntu in ay miiqdaan oo keeni doonta guul weyn. Sidaas dib fadhiisan iyo nasato. Waxaa soo jiidata heer sare RTP ah 96.60%.
NRVNA waa ciyaaryahan ku salaysan booska video ah oo ballan qaaday in ay bixiyaan madadaalo iyo madadaalada. Haddii aad tahay lover ah naadi oo raadinaya ciyaar booska cajiib ah ka dibna this mid aad ceebayso doonaa. Diiwaan for free at our casino si aad u hesho xirmo fiican soo dhaweyn ah 200% on your deposit hore ee ilaa £ 50.00.Hurry biiro our casino hadda!